Ii-FAQ ze-CBD- Zama i-CBD ezolileyo
Iinyani ezili-12 malunga neDelta 8 THC
Buza kude kwaye ukuba unayo umbuzo engaphendulwanga apha, zive ukhululekile ukunxibelelana nathi
Nge-256-302-9824 okanye usithumelele i-imeyile apha service@trytranquil.net.
CBD yinto eyenzeka ngokwendalo yesityalo se-hemp. Ayisiyotywala i-phytocannabinoid enika uluhlu lokusetyenziswa komzimba wonke. I-CBD yenye yeephytocannabinoids kunye nezinye izinto ze-phytochemicals ezifumaneka kwi-hemp.
Yintoni ioyile ye-CBD?
Ioyile ye-CBD ivela kwizityalo ze-hemp ezinamanqanaba aphezulu e-cannabidiol (CBD) kunye namanqanaba asezantsi e-THC. I-CBD ezolileyo ivelisa ezinye zeoyile ze-CBD ezisemgangathweni zentengiso, ethathwe kwizityalo ezisempilweni, ezityebileyo ze-CBD ezikhuliswe apha eMelika.
Yenziwe njani ioyile yethu ye-CBD?
I-hemp yethu yi-Food Alliance eqinisekisiweyo, ikhulile kwaye ivunwa kwiifama zethu eAlabama naseKentucky. Kwiifama ezinqabileyo, sisebenzisa i-cryo ethanol yokukhutshwa ukuvelisa i-decarboxylated crude ebusika ebusika, esandula ukwenziwa ukuba ibe sisibane esipheleleyo se-distillate ngokusebenzisa iindlela eziphambili zokwenza uhlalutyo (okt spd & wfd).
Nguwuphi umahluko phakathi kwehemmpi nentsangu?
Ngokwenzululwazi, i-hemp yoshishino kunye nentsangu zizityalo ezifanayo, ezinegama lohlobo kunye negama leCannabis sativa. Banobume obukhethekileyo bemfuzo, nangona kunjalo. Ngokuqhelekileyo, mveliso hemp inemicu emide kakhulu ineendiza ezomeleleyo ezinde kunye neentyatyambo ezimbalwa. Izityalo zeMarijuana zihlala zincinci, i-bushier, kwaye zigcwele iintyatyambo. Nangona kunjalo, iintlobo ezintsha zeshishini e-USA ziyafuywa ukuze zibe neentyatyambo ezininzi kunye nezivuno eziphezulu ze-cannabinoids kunye ne-terpenes, ezinje ngeKentucky hemp esiyisebenzisayo ngoku. Uninzi lwexesha, intsangu inexabiso eliphezulu le-THC kunye nexabiso eliphantsi kakhulu le-CBD. I-hemp, kwelinye icala, ngokwendalo inexabiso eliphezulu le-CBD (kwiimeko ezininzi) kwaye ilandelela kuphela izixa ze-THC. Ngethamsanqa, iprofayili ye-cannabinoid ye-hemp ilungele abantu abafuna izibonelelo ezivela kwi-cannabis ngaphandle 'kokuphakama.' Ngokwembali, i-hemp ibisetyenziselwa ukwenza iimveliso zokutya, ifayibha, intambo, iphepha, izitena, ioyile, iplastiki yendalo, nokunye okuninzi. E-US, intsangu ihlala isetyenziselwa ukuzonwabisa kunye namayeza. Igama elithi "i-oli ye-cannabis" linokubhekisa kwi-intsangu okanye kwi-oyile efumaneka kwi-hemp, kuba intsangu kunye ne-hemp ziindlela ezimbini ezahlukeneyo ze-cannabis. Zonke iioyile ze-CBD ezizolileyo zithathwe kwi-hemp.
Ngaba ioyile ye-CBD isemthethweni?
I-CBD evela kwi-hemp ifumaneka ngokubanzi eMelika. Ngo-2018, ukuhlaziywa kweBhili yaseFama yase-US kusemthethweni ukutyala i-hemp phantsi kwemigaqo ethile. Iimveliso ze-CBD ezizolileyo zifunyenwe kwi-hemp yaseMelika ekhulile, ephezulu ye-CBD kwaye zihambelana ngokupheleleyo neT. Siyazingca ngokuhambisa ngenqanawe mahala, izaphulelo kumagqala, kunye nokuthenga okuninzi kakhulu kuzo zonke iimveliso zethu.
Ndingayigcina njani i-CBD yam? Yintoni ubomi beshelufu?
okanye obona bomi beeshelufa buhle, imveliso yakho ezolileyo kufuneka igcinwe kwindawo epholileyo, epholileyo, emnyama endaweni kude nelanga. Oku kuya kunceda ukugcina iipropathi ze-hemp. Ukuba i-CBD egcinwe kakuhle inokuba neshelufu lonyaka.
Ngaba ndiza kusilela kuvavanyo lweziyobisi ukuba ndithatha iimveliso ze-CBD?
I-oyile ye-CBD ezolileyo ifunyenwe kwi-hemp ekhuliswe e-USA, kwaye inokuba namanqanaba e-THC angaphantsi kwe-0.3%. I-CBD ezolileyo ayiqinisekisi ukuba uya kudlula okanye awuyi kudlula kwiscreen seziyobisi emva kokutya iimveliso zethu. Kungenzeka ukuba umxholo we-THC ungaboniswa kuhlolo lweziyobisi ezahlukeneyo.
Yeyiphi indlela ebalaseleyo yokusetyenziswa?
Iimveliso ze-CBD ezizolileyo ziyafumaneka ngeendlela ezahlukeneyo. Sinikezela ngeoyile ze-CBD ezilula, ezinyulu, nezisebenzayo, kwaye zigqityiwe ngokubeka amathontsi ezantsi kolwimi. Sinikezela ngemveliso eqengqelekayo, ebonelela ngokungabinangxaki, usetyenziso olufanelekileyo olusebenza kakhulu ekuhambeni kwaye ikuvumela ukuba ukhombe ngqo apho ufuna ukujolisa kwizibonelelo ezihlala ixesha elide. Sikwanikezela ngekrimu esisihloko, efakwe ioyile, efanelekileyo, kwaye ehlala ixesha elide, ngelixa ubonelela ngoluhlu lwezibonelelo zempilo. Nceda ujonge ibhlog yethu kunye namaphepha emveliso eyahlukeneyo ukumisela ukuba yeyiphi imveliso enokulungela wena kunye neemfuno zakho.
Ngaba ndiza kuphakama?
Zonke iimveliso ze-hemp zethu zokukhupha zenziwe kwi-hemp yoshishino kunye Amanqanaba eTHC ngaphantsi kwe-0.3%. Akukho siphumo sinxilisayo ekuthatheni iimveliso zethu.
Uyintoni umgaqo-nkqubo wokuhambisa ngenqanawa we-CBD?
Ukuhanjiswa kweKhaya eMelika yi- $ 7.99 nge-odolo nganye kwaye iya kuthunyelwa ngeFedEx kusetyenziswa ukuthunyelwa ngeyure ezingama-48. Ixesha lethu lokuphatha ziintsuku ezi-2 zomsebenzi. Nceda, vumela iintsuku ezi-4 zeshishini ukuba ufumane iodolo yakho. Asithumeli nqanawa eIdaho, eMontana, okanye eMzantsi Dakota.
Ukuhanjiswa kwamanye amazwe yi- $ 25.00 nge-odolo nganye. Ukuhanjiswa ngokubanzi kuthatha phakathi kweentsuku ezingama-7-21 ukufika. Imihla yokuhanjiswa okuqinisekisiweyo okanye amaxesha awafumaneki kuThutho lwaMazwe ngaMazwe.
Kuya kuthatha ixesha elingakanani ukufumana imveliso yam?
Ngokwesiqhelo uya kuyifumana imveliso yakho ngaphakathi kweentsuku ezi-3 ukuya kwezi-4 zokusebenza kwee-odolo zaseMelika zaseMelika. Ii-odolo zamanye amazwe ngokubanzi zithatha iintsuku ezingama-7-21 kodwa azinakuqinisekiswa.
Imbuyiselo kunye neMbuyiselo
Zonke iintengiso ezithengwayo kule ndawo ZIPHELELE. Ukubuyisa, okanye isicelo sokubuyiselwa imali asiyi kuvunywa.
Amazwe asithumeli eUnited States
Ngenxa yemigaqo yaseburhulumenteni yase-US, sithumela iimveliso ze-CBD kuwo onke amazwe ase-US ngaphandle kwe-Idaho, Wyoming nase Mzantsi Dakota. Asizithumeli ezi zinto.
I-CBD ezolileyo ngowona mthombo wakho uphucukileyo, iimveliso zentlalontle ezifikelelekayo ezenziwe nge-CBD evela kwi-hemp.
I-725 Blount Avenue, eGuntersville AL 35976
© 2020 Ucoceko lweCBD
ungaphezulu kweminyaka eli-18?
Umxholo osemva kwalo mnyango uthintelwe, ngaba uneminyaka eli-18 ubudala okanye ngaphezulu?